तपाइँलाई कोहि पाटनर(साथी )को आबस्यक छ यसरि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस पाउनुहुने छ सबै सुबिधा नै सुबिधा – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/तपाइँलाई कोहि पाटनर(साथी )को आबस्यक छ यसरि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस पाउनुहुने छ सबै सुबिधा नै सुबिधा
तपाइँलाई कोहि पाटनर(साथी )को आबस्यक छ यसरि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस पाउनुहुने छ सबै सुबिधा नै सुबिधा
दुई छोराकी आमा भर्खर जुँ’गाको रेखी ‘बसे’को तन्नेरीसँग ‘चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ रु अर्थात्त्र हो तरु श्रीमान् ‘वि’देशमा हुने, श्रीमान्को मा’या नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला,??
उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू ‘आन्टी’हरूसँग फस्नुका कारण अ’नेक छन्।कसैका लागि यो एकप्रका”रको रोजगारी हो, कसैका लागि आर्थिक संकट हल गर्ने उपाय। अनि, कसैका लागि परिपक्व महिलासँग देहयात्राको आनन्द।
यस्तो सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्ति किन बढ्दै छ समाजमारु अनि यसका जटिलता के–के हुन्रु अम्मर जिसीले केलाउन खो’जेका छन्।केस नं १ ‘काठमाडौँका २३ ‘वर्षीया जनम परिवारले बिहेको कुरा झिक्यो कि सुइँकुच्चा ठोक्छन्। अरू विषयका पारिवारिक छलफलमा उनी सहभागी हुन्छन्। तर, बिहे भन्नासाथ उनको सातो जान्छ।
कारण, उनी आफूभन्दा झन्डै दोब्बर उमेरकी महिलासँगको प्रेममा फसेका छन्। एक प्रहरी निरीक्षककी ४२ वर्षीया श्रीमतीको मायाजालमा परेका जनमलाई अहिले यो सम्बन्ध निल्नु न ओकल्नु भइरहेको छ। भन्छन्, ‘पहिले बिहे भएको र दु–दुइटा छोराकी आमा हो भन्ने थाहै भएन। आँखा चिम्लेर लभ गरियो। अहिले उम्किनै गाह्रो भा’छ।’उनका श्रीमान् प्रायः घरबाहिर हुने र उनको खासै पर्वाह नगर्ने भएकाले उनी आफूसँग लहसिएकी जनम बताउँछन्।सम्पर्क गर्नको लागी तल क्लिक गर्नुहोस..‘
मैले छुँदामात्रै पनि मक्ख पर्छिन्,’ उनले भने, ‘मैले हेरेको, छोएको साह्रै मन पर्छ रे। मसँग टाँसिरहन खोज्छिन्। त्यसैले मैले पनि उनलाई छोड्न सकिरहेको छैन। मलाई मर्का पर्दा सहयोग पनि गर्छिन्। साढे तीन वर्षमा करिब सात लाख रुपैयाँ सहयोग पाइसकेँ।’ केस नं २ शंखमूल, काठमाडौँका २४ वर्षीय विवेकको जिन्दगी ऐसआरामसाथ बितिरहेको छ। कामधन्दा, रोजगारी केही छैन। दिनभरि घरतिरै बरालिने वा साथीभाइसँग डुल्ने गर्छन्। यद्यपि,उनलाई आर्थिक संकट कहिल्यै पर्दैन। चितवनस्थित बा–आमालाई पनि गुहार्दैनन् उनी।यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला,??